किन आमाको गर्भैदेखि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ छोरीले ? « Sansar News
किन आमाको गर्भैदेखि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ छोरीले ?
११ भाद्र २०७४, आईतवार ०५:२०
नारी र पुरुष बीचको असमानता युगौयुगदेखि चलिरहेको भन्ने अनुमान हामी पौराणिक कथा रामायणमा सीता हरण र महाभारतमा द्रोपदी वस्त्रहरणबाट हामी लगाउन सक्छौं । यी विभिन्न किसिमका हरणबाट सजिलै बुझ्न सकिन्छ कि नारीलाई त्यसबेला देखि नै कमजोर मानिन्थ्यो । तर, नारीले विद्रोह नगरेको भए सायद आज रामायण र महाभारत जस्ता महापुराणहरु लेखिएका हुने थिएन होला । त्यतिबेला पनि नारीलाई आफ्नो पवित्रताको अग्नि परीक्षा दिन प¥यो । त्यसबेला पनि रामायणमा भगवान मानिएका श्रीरामले आफ्नी पतिव्रता सीतालाई भन्दा समाजको विश्वास गरि सिताको पवित्रताको अग्नि परिक्षा लिएका थिए । युग परिवर्तनसंगै नारी आज पनि आफ्नो अस्तित्वको लडाई लडि नै रहेका छन् ।
आजको आधुनिक युगमा अब नारीलाई गर्भबाट नै सघर्ष सुरु गर्नु परेको छ । नारी अस्तित्वलाई भ्रुणबाटै मेटाउनको लागि हरेक ठाउँमा सरकारी मान्यता नै पाईरहेका व्यापार केन्द्र (गर्भपतन केन्द्र) खोलिएका छन । आज नारीलाई नारी भइ जन्मनु आफैमा एक अभिशाप हो भन्ने भान हामी र हाम्रो समाजले गराउदै आइ रहेका छौ ।
नारी र पुरुषबिचको असमानताको लागि हजारौं आधारहरु निर्माण गरिएका छ्न । नारिलाई आफ्नो जीवनकालको हरेक मोडमा संघर्षरत रहनु पर्ने बाध्यताहरु सिर्जना गराइएका छन । खास गरि उ नारी जसलाई हामीले एकल नारी या श्रीमानले छोडेका (डिवोर्सि) को नामबाट चिन्छौ । जसलाइ समाजमा परपुरुषसँग बोल्ने अधिकार समेत छैन । जसलाइ हामी असल नारी भइकन पनि चरीत्रहिनको संज्ञा दिने गर्दछौं । एकल हुदैमा के स्वतन्त्र भइ बाच्न नै नपाउनु हो र ?
एकल महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि समाजमा अरु महिला भन्दा फरक छ । एक छुट्टै किसिमको धारणा बसालिएको छ सबैको मस्तिष्कमा की, उनिहरु विकृति हुन, गलत हुन, सबै जोगिनु पर्छ उनीहरुदेखि । उनीहरुले विवाहित पुरुषहरु बिगाछ्र्न रे ! समाजमा यो कस्तो संस्कारको विकास गर्दैछौं हामी ? एक असल अनि एकल महिला र एक असल विवाहित पुरुषबिचको असल मित्रताको सम्बन्ध कसरी असभ्य अनि अनैतिक हुन्छ ? हामीहरु उनी पुरुष र एकल महिला भएको कारण उनीहरुको सम्बन्धलाई गलत बनाइ टिकाटिप्पणीको विषय बनाउन पछि पर्दैनौं ।
अन्त्यमा जब प्रकृतीले नै हामीलाई विपरीत लिङ्गीप्रति आकर्षणको गुण दिएको छ भने हामी किन स्विकार्न सक्दैनौं ?